Global Voices teny Malagasy » Nanakatona Seha-Baovao Miisa Enina i Kambôdza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Septambra 2017 4:35 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Mpikambana ao amin'ny gazety mivoaka isan'andro ao Kambodza mamoaka sora-baventy miantso ho amin'ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ao Kambodza. Loharano: Facebook
Nanakatona seha-mpampitam-baovao miisa enina i Kambodza tao anatin'ny telo herinandro: gazety mivoaka isan'andro iray, servisy fampitam-baovao vahiny roa ary radio ao an-toerana miisa telo. Nilaza ny governemanta fa nanitsakitsaka ny lalànan'ny hetra sy ny fanomezana lisansa ao an-toerana ireo orinasam-pampitam-baovao ireo, saingy mihevitra kosa ny vondrona fampitam-baovao maro sy ny antoko mpanohitra ara-politika fa midika fanakatonana izay feo mitsikera mialoha ny fifidianana ankapobeny izao fanakatonana izao.
Ny Cambodia Daily gazety mivoaka isan'andro amin'ny teny anglisy ao Kambodza, niorina tamin'ny taona 1993 amin'ny maha-orinasa sosialy azy, dia nampangaina ho tsy nandoa hetra. Notsipahan'ny  mpamoaka asa an-taratasy izany fiampangana izany.
Ankoatra izany dia voalaza ihany koa fa tsy nomena fahafahana hampakatra ny raharaha na hifampiraharaha amin'io resaka hetra io ny gazety.
Mandritra izany fotoana izany, nodidiana hikatona noho ny tsy fisoratana anarana ao amin'ny departemantan'ny hetra ihany koa na ny Radio Free Asia (RFA) na ny Voice of America (VOA) ao Kambodza — izay samy tohanan'ny governemantan'i Etazonia –.
Nofoanan'ny governemanta ihany koa ny lisansan'i Moha Nokor FM 93.5, izay mampiely ny votoatin'i RFA sy ny VOA, ary nofoanana toy izany ihany koa ny programan'ny mpanohitra amin'ny onjam-peo.
Niatrika fahatapahan'ny fandaharana  ao amin'ny tobim-pampielezam-peo telo any amin'ny faritany ihany koa ny Voice of Democracy (VOD na Feon'ny Demaokrasia). Notaterina tamin'ny voalohany fa olana ara-teknika no nahatonga ny fahatapahana, saingy taty aoriana dia nohamafisin'ny toby fampielezam-peo fa nobaikoana izy hampitsahatra ny fampielezam-peo. Nandritra ny telopolo taona farany no nampiatranoan'ny VOD programa mitsikera ny antoko mitondra.
Niezaka i Yi Chhor Vorn, talen'ny Moha Nokor, hanazava  ny antony nanakatonan'ny governemanta ilay toby fampielezam-peo:
Nolazain-dry zareo tamiko fa nanakatona azy ry zareo satria ts nampafantatra an-dry zareo ny torohay momba ny saran'ny fotoana itenenan'ny mpanjifa izahay. Saingy mihevitra aho fa efa nanao ny asanay izahay. Mandoa hetra izahay sy fahazoan-dalana ary mazava loatra fa nanaraka ny torolalana rehetra.
Ny fanakatonana tampoka ireo orinasam-pampitam-baovao ireo dia hitan'ny vondrona maro ho endrika fanohintohinana ara-politika ataon'ny antoko mitondra izay very  toerana maro ry zareo nandritra ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2013.
Nampitandrina  i PA Nguon Teang avy ao amin'ny Foibe Kambôjiana misahana ny Fampitam-Baovao Mahaleotena fa “hampisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fizotran'ny fifidianana ao amin'ny firenena ny fanafoanana ny fampitambaovao mahaleotena.”
Nanamafy  i Chak Sopheap avy ao amin'ny Foibe Kambôjiana Misahana ny Zon'Olombelona fa “ho feno ny fanakendana ny fiainam-bahoaka manankarena sy matanjaka ao Kambôdza rehefa tsy misy intsony ny fampitam-baovao afaka.”
Namoaka fanambaràna fanohanana  ny Cambodia Daily, iray amin'ny gazety roa miteny anglisy ao amin'ny firenena ny Mpikamban'ny Gazetin'i Kambôdza Ampitan-dRanomasina:
Namelona tantara maro izay nahatezitra ny governemanta ny Cambodia Daily ka mahatonga ny maro hihevitra fa nampiasaina ikendrena ireo mpitsikera mialoha ny fifidianana ankapobeny taona 2018 ny departemantan'ny hetra.
Nandrisika  an'i Kambodza i Edgardo Legaspi, tale mpanantateraky ny Firaisakinan'i Gazety Aziatika Atsimo-Atsinanana, hanaraka ny fomba fanao mahazatra rehefa misy ny raharaha mahatafiditra fampitam-baovao:
Hita fa mampiasa fanasarotana ara-teknika ampifanarahana amin'ny lalàna ny governemanta kambôjiana hanafenany ny tena tanjona hampanginana ireo feo mahaleotena. Ataon'ny governemanta laharam-pahamehana kokoa ny fanakatonana seha-baovao noho ny fanomezana fombafomba tsy mitongilana ahafahany manatontosa ny adidiny.
Nampian'i Legaspi fa manjavozavo ny lalàna fanomezana alalan'i Kambôdza ka tokony nosafidin'ny governemanta kokoa ny mipetraka miara-midinika amin'ny orinasa nampangaina ho tsy nanaraka ny fitsipîky ny firenena fa tsy ny fanakatonana azy ireny.
Saingy notsipahin'i  Khieu Kanharith, minisitry ny filazam-baovao ny filazana fa manohintohina ireo fampitam-baovao mahaleotena ny governemanta.
Nanakatona ireo tobim-pampielezam-peo ireo ny minisitera satria nanitsakitsaka ny fifanarahana nifanaovana taminy ry zareo. Efa nijery ny amin'ireo tobim-pampielezam-pao hafa izay mampindrana amin'ny VOA sy ny RFA izahay, ary mbola misokatra ireo.
Nanitrikitrika ihany koa izy fa resaka fanitsakitsahana ny hetra ihany no raharaha mahavoarohirohy ny Cambodia Daily:
Mihevitra aho fa tsy tokony hanao fihetsiketsehana mitaky ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety ny mpanangom-baovao ao amin'ny Cambodia Daily satria tsy olana fahalalahan'ny fanaovan-gazety io, fa resaka lalànan'ny hetra nampiharina.
Ankilan'ny fanakatonana seha-baovao maro, dia manakombom-bava ireo ONG vahiny maro ihany koa i Kambodza, izay mahatonga ny andrim-pikambanana maro hatramin'ny governemanta vahiny maro haneho ny ahiahiny  amin'ny fiharatsian'ny toe-draharaha politika ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/04/106341/
 fahatapahan'ny fandaharana: https://www.cambodiadaily.com/second2/voice-democracy-latest-casualty-attack-independent-media-134059/